Sida loo Download, Samaynta, Iyo La Beddelaan ah Online Music playlist
> Resource > Music > Sida loo abuuro An Online Music playlist
Ma hore mid ka mid ah lagala soo bixi files music aad? Maxay ku saabsan waxa ay qabanayaan in dhamaystiran playlist oo dhan? Welwelsan waafaqid qaabka faylka iyo codec? Noqon doonaa in aad awoodid in aad sidaas samayso, dhibaatana-free la AllMyTube . Waxaad kala soo bixi kartaa fanaanada ugu jecel yahay, album ama uruurinta music ee playlist dhamaystiran in la heli karo ee ku saabsan goobaha music online kala.
Haddii aad jeceshahay inaad u Qoraynaa halkii download a buuxa, AllMyTube qaataa in aad. Shaki la'aan Waxaa kale oo kale, laakiinse waxaa laga yaabaa baahan doontaa in aad kala soo bixi software dhowr ah si ay u abuuraan playlist music online in uu ku qalabaysan Converter faylka dhisay-in ciyaaryahan warbaahinta iyo sidoo kale. Wad akhriska ee hage tallaabo-tallaabo ku saabsan sida aad kala soo bixi kartaa, la abuuro oo aanay online iyo music playlist.
Talaabada 1: Download music online
Talaabada 2: Beddelaan files music
Talaabada 3: Transfer for loo maqli karo
Talaabada 4: waxa dhan Qor
Waxaad la laba hab oo kala duwan oo kala soo bixi kartaa adiga oo music online. Wixii habka ugu horeysay, waxaad u baahan doontaa in caleenta iyo furto goobta online in uu leeyahay file music aad jeceshahay kaydiyaa. Software ayaa markaas si toos ah lagu ogaan doonaa file warbaahinta iyo aad si fudud u riixi kartaa ugu Download tab muuqata ee dhinaca kore ee midig ee aad file ka-noqon-loo maqli karo warbaahinta. Waxaad dooran kartaa inaad kala soo baxdo playlist dhameystiran liiska dropdown menu.
Waxa kale oo aad si fudud u nuqul ka-iyo-paste karaa URL link aad file warbaahinta ee gujinaya ah + URL paste button on dhinaca kore ee bidix ee interface ka. File warbaahinta ayaa si toos ah laftiisa soo bixi doonaa ka dib.
Marka ay dhameystirtay dajinta, naftaada maraan si ay u soo bixi (ama ku dhameysatay nooca ugu dambeeya ee 3.8) uu furmo suuqa ka Murayaad navigation bidixda ah. Waxaad riix kartaa file ka soo dejisan lagu soo saaro si deg deg ah ama Beddelaan iyaga qaab file in aad jeclaan doonaa si loo maqli karo waxay noqon kartaa qalabka la qaadi karo wax kasta oo aad door bidayso.
Waxaa aad u habboon in si aad doorato qalabka aad wareejiyo soo bixi music playlist online la presets dhisay-in. Waxaad dooran kartaa midkood jecel , Qaabka ama Device . Wixii doorasho ka badan, riix -arrow hoos double icon. Aad files warbaahinta badaley waxaad ka heli kartaa ka badaley uu furmo suuqa.
Qaar ka mid ah uu jeclaan lahaa si ay u qoraan files ay warbaahinta eegista. Haddii taasi waxa weeye waxa aad jeceshahay doonaa, raac this:
Burcad taariikhqorihii video ka menu aad Window ee bilowga ah. Si fudud ku qor in Wondershare Video taariikhqorihii galay finder ka.
Fur goobta online in aad rabtid in aad qortid ka.
Riix Rec mar labixiyo cas u muuqataa, daboolaya video sida hoos ku qoran.
Fiiro gaar ah : Waqti duubo si aad u iska tagi karo iyo wax kale samayn dabadeedna soo noqda dib u soo ceshano faylasha aad mar sameeyo. Si fudud u soo celiyaan Tallaabada 2 iyo 3 haddii aad u baahan tahay si loogu badalo faylasha.
Bilow in la abuuro aad playlist music online gaar ah maanta. Download oo dhan music aad rabto mid ka mid ah ama iyaga u qoraan sida aad u tagto. Ha u ogolaan qaab faylka aad walwal. Waxaa Beddelaan si aad iyaga mar walba ku raaxaysan karaan iyo meel kasta oo aad rabto!